‘बुटिकमा कपडा बनाउन आउनेको संख्या बढ्दो छ’ – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ मंसिर २३ गते आईतवार ११:२६ मा प्रकाशित
१) बुटिक व्यवसायमा पहिला र अहिले के कस्तो फरकपन पाउनु भएको छ ?
अझै पनि बुटिक भन्ने बित्तिकै कत्तिको मनमा टेलरिङको काम भनेर नै सोचिन्छ । हुनतः यसमा पनि टेलरिङकै कामहरु भएपनि बुटिकमा स्पेशल गरेर फेसनको ड्रेसहरुको बारेमा प्रोफोसनल तरिकाबाट काम गरिएको हुन्छ । बुटिकमा कुन बडीलाई कस्तो किसिमको ड्रेस म्याच हुन्छ, कुन रंग कस्तो किसिमको फेसमा सुट हुन्छ भन्ने कुराहरुलाई बढी ध्यान दिएर काम गरिन्छ ।
२) बुटिकमा जाडो मौसमको लागि नै भनेर कस्तो किसिमको फ्रेबरिकहरु ल्याउनुहुन्छ ?
जाडो मौसमको लागि भनेर अहिलेको समयमा उनी र कटनको मिक्स कपडाहरु आउने गर्छन् । त्यस्तै, बिशेष गरेर जाडोको मौसममा भेलभेटको फ्रेबरिकहरु आउँछन् ।
यस फ्रेबरिकमा ब्लाउज, आउटर, कोट यसमा पनि स्पेशल ज्याकेट जुन पार्टीहरुमा जाँदा साडीमा पनि सजिलै लगाउन सकिने खालका कपडाहरुको मागसँगै बुटिकमा बनाउन आउनेहरुको संख्या पनि बाक्लो हुन्छ ।
३) बुटिको बजारमा मानिसहरुको क्रेज कस्तो पाउनु भएको छ ?
पछिल्लो समय यता बजारमा बुटिकमा कपडा बनाउन आउनेको संख्या निकै बढेको देखिन्छ ।
पछिल्लो केहि समय यता फोटो हालेर फेसबुक इन्स्टामा रमाउनेहरुको संख्या पनि बढ्दो छ त्यसैको प्रभाव बुटिक पनि देखिन्छ । एक पटक लगाएको कपडा फेसबुकमा हालेपछि अर्काे पटक नलगाउने ट्रेण्डले पनि अहिलेको युवा पुस्तामा ठाउँ अनुसार, समयअनुसारको कपडाहरुमा ध्यान गएको देख्न सकिन्छ ।
प्रस्तुति : बिनिता सुनार
चल्छ आरनः चल्दैन जीवन
कोदो फलाउने किसानलाई अब पुरस्कार
सरुवा भएको तीन महिना नबित्दै हेडक्वार्टर तानिए सिन्धुलीका एसपी ‘आभुषण…
अन्तर्वार्ता :‘स्मार्ट सिटी’ हाम्रो लक्ष्य हो :वालिङ नगर प्रमुख दिलीपप्रताप खाँण
६ केजी गाँजासहित धादिङका सानुकान्छा पावरहाउसबाट पक्राउ
प्रभावकारी बन्दै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
सुदूरपश्चिममा उल्लासपूर्वक ‘बिसु’ पर्व मनाइँदै
सरकार सकेसम्म लकडाउन नगर्ने पक्षमा छ : प्रधानमन्त्री ओली